LOZA NISESY ROA VOLANA :: Lehilahy telo hita faty tao amin’ny farihin’Andraikiba • AoRaha
LOZA NISESY ROA VOLANA Lehilahy telo hita faty tao amin’ny farihin’Andraikiba
Roa volana, razana telo! Fatin-dehilahy iray, manodidina ny 35 taona, indray no hita natsingevan’ny rano tao amin’ny farihin’Andraikiba, omaly. Mponina sy mpanasa lamba any amin’iny faritr’
i Malakialina iny no naha­tsikaritra ny razana nitsin­gevana teo amin’ny iray metatra sy sasany miala ny moron-drano.
Nampandre ny filohan’ny fokontany, omaly, tokony ho tamin’ny enina ora maraina, izy ireo. Fanintelony tamin’ny fatin’olona hita tao Andraikiba ity omaly ity, tao anatin’izay roa volana farany izay.
Nihohoka ny razana. Mba hijerena ny endriny dia navadik’ireo tompon’andrai­kitry ny fandriampahalemana eny an-toerana saingy efa potika tanteraka. Tsy nisy namantarana azy intsony. Tonga nizaha ny razana teny an-toerana ny pôlisy sy ny avy ao amin’ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana sy ny fahasalamana.
Tamin’izany no nahalalana fa efa manodidina ny telo andro no nahafaty an’io lehilahy izay tsy nisy namantarana azy io. Tomba­nana ho efa tsy nisy aina ihany koa izy vao nalatsaka tao anaty rano saingy ny fanadihadiana lalina mbola hatao no hanamarina na handiso izany. Naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hôpitaly Atsimo ny razana. Raha tsy misy fianakaviana maka azy dia tsy maintsy halevin’ny kaominina, anio.
Fikasana tsy tanteraka
Raha tsiahivina dia vao ny alakamisy lasa teo no nisy tovolahy namoy ny ainy tao amin’io farihin’Andraikiba, izay miantoka ny rano fisotron’ny mponin’Antsirabe io.Tafakatra ho telo ny razana hita tao amin’ity farihy manana ny lazany sy mahasintona mpizaha tany maro ity tao anatin’ny volana novambra sy desambra. Vehivavy mitondra vohoka, izay noraràna tsy hanambady ny rain-janany sy tovovavy vao erotrerony voalaza ho kivy noho ny olana ara-pianakaviana ihany koa no fantatra fa nikasa hamoy fo tao, tamin’iny faramparan’ny volana novambra iny saingy avotra soa aman-tsara avokoa.
Ho fitandroana ny lazan’ ity farihy ity, indrindra fa ho fitandroana ny fahadiovana sy ny fahasalamana, dia nandray fepetra ny avy eo anivon’ny fokontany. « Hisy ny fanaraha-maso ireo vahiny mpivezivezy eny amoron’ny farihy. Manomboka izao dia voarara ny fidiran’olon-tokana eny an-toerana », hoy Randriamiarisoa Joseph Emile, lehiben’ny fokontanin’Andraikiba.
Varotra sy asa tanana Miaka-bidy ny fanaka vita amin’ny hazo sarobidy
Fametrahana tanàna filamatra Fokontany telo hovaina endrika eto an-drenivohitra
Fitaovam-piadiana Mahatratra iraika amby roapolo ireo basy naterin’ny dahalo tany Isandra
Fifanarahana farany 100 ariary hatramin’ny 500 ariary ny fihenam-bidin’ny solika
TONTOLON’NY ASA :: Mbola vitsy ireo mpiasa an-trano misitraka ny fiarovana ara-tsôsialy
ANKAZOABO ATSIMO :: Mpirahalahy niara-maty voatifitra teny an-dalana